Emailvision Inotangisa Email, Zvemagariro uye Kwevatengi Njere | Martech Zone
Kudzoka muna Kubvumbi, takazivisa izvozvo Emailvisionvision yakanga yatenga SmartFOCUS. Iye zvino waGumiguru uye mhedzisiro yekubatanidzwa hakuna zvishoma kushamisa, kubatanidza Email, Yemagariro uye Kwevatengi Njere mune imwe mhinduro. Emailvisionvision yakazivisa zviri pamutemo kuburitswa kwe Campaign Commander Bhizinesi.
SmartFOCUS yaive nemutengi-server mhinduro ine inoshamisa mushandisi interface uye yekudyara dhatabhesi iyo yakaita kuti zvive nyore kuvaka terabyte-saizi dura dura asi nyore kuichekacheka uye kuisanganisa iwo mune chaiyo-nguva - mune imwechete dhonza uye kudonhedza interface.
Isati yasvika iyo SmartFOCUS kutora, Emailviewvision yakatengwa Chinangwa Marketer - dhizaidhi yemagariro. Zvinotaridza kuti ivo vakasanganisa akanakisa maficha ehukama uye yevatengi njere matekinoroji mune yavo nyowani yechigadzirwa kuburitswa, Campaign Commander Bhizinesi. Mashoko haaiti ruramisiro… saka heino vhidhiyo yavakaisa pamwechete:
Chii chinetso cheindasitiri? Iyo yepamhepo nharaunda yakagadzira kuwandisa kwedata, asi hombe nyaya kune yekushambadzira / yekushambadzira maindasitiri anga achinyatso kuita chero chinhu nayo. Kugadzira zvinonzwisisika zvinonzwisisika kubva kudhata kwave kuri kwakanyanya zviwanikwa uye pa-fungidziro yevatengi ungwaru mhinduro dzauya neinorambidza set-up uye marezinesi emitengo
Campaign Commander Enterprise Edition Inogadzirisa Sei Dambudziko iri? Emailvisionvision iri kupa vashambadziri nzira inodhura yekukurumidza kutendeuka data kubva kuemail yavo, nharembozha uye zvemagariro mushandirapamwe kuita hunhu hunoshanda. Nenjere idzi, vanogona kuita zviri nani chikamu chevatengi uye vape mamwe akakodzera mameseji pane nhunzi. Vashandisi vekupedzisira vaona kuwedzera kunoshamisa kwemari kubva kumusoro- uye muchinjiko-kutengesa wega.
Chii chakataurwa nevatengi ve beta? Vatengi muchirongwa chebeta bvunzo vanotaura kuti chigadzirwa chinomhanyisa maitiro ekutsvaga mamirioni evatengi marekodhi kuti vaone mikana kubva pamazuva kusvika kumasekondi mashoma.
Ndezvipi zvakanakira SaaS? Nepo kungwara kwevatengi kuchikosha, munguva yakapfuura kwave kuchidhura. On-premise mhinduro akamhanya angangoita $ 1M uye zvakatora mwedzi kuita. Izvo zvakare zvakatora vaongorori ve data kuti vanzwisise mhedzisiro. Campaign Commander Enterprise Edition inopa inobvumidza chero munhu kuti akurumidze kuona data uye ateedzere yavo chitima chekufunga kugadzira zvikamu zvitsva zvinogona kushandiswa ipapo ipapo.
Nei uchifanira kufarira nezve Emailview? Emailvisionvision iri kuenda kuburikidza nenguva yekuwedzera kukura uye hunyanzvi. Mushure mekuwana smartFOCUS uye ObjectiveMarketer gore rino, kambani ine mahofisi uye zvikwata zvevashandi venyika munyika 19 uye inoita mishandirapamwe pasirese. Ichi chigadzirwa chitsva chinopa chakazara kwazvo, chakapusa pane-chinodikanwa online hukama kushambadzira chishandiso chakaisirwa kuwedzera zvakanyanya kukosha uye mhindu yehurongwa hwehukama hwehukama hwevatengi.
Makorokoto kuna Nick, Charles uye nechikwata ku Emailvision! DK New Media aishanda nechikwata panguva yekutora kwavo SmartFOCUS uye zvinonakidza kuona uku kusimukira kwechokwadi muindasitiri. Saina chiratidzo chekuratidzira pa Emailvision's Campaign Commander Bhizinesi nzvimbo.
Tags: Campaign MutungamiririCampaign Commander Bhizinesiemailsmartfocus
Facebook ndiyo New Website